Manuel Pellegrini Oo Ku Jees-jeesay Jurgen Klopp, Kuna Tilmaamay Mid Garsooreyaashu Caawiyaan - Muxuuse Ka Yidhi Inuu Caawiyey Manchester City? - Cadalool.com
Manuel Pellegrini Oo Ku Jees-jeesay Jurgen Klopp, Kuna Tilmaamay Mid Garsooreyaashu Caawiyaan – Muxuuse Ka Yidhi Inuu Caawiyey Manchester City?
Tababare Manuel Pellegrini ayaa ku eedeeyey Liverpool inay tahay koox caadaysatay inay guusha ku hesho goolal offside ah, mar kalena ay isku dayday inay sidii oo kale samayso kulankii xalay.
Manuel Pellegrini ayaa waxa uu tilmaamay in marka la eego kulamadii xili ciyaareedkan ee Liverpool ay marar badan saaciido ka hesho garsooreyaasha oo u fasaxay goolal offside ah oo ay guusha ku heshay, waxaana uu si gaar ah ugu canaantay tababare Klopp oo uu xusay inuu yahay ninka dhaqankaas iska leh.
Labadan tababare waxa ka dhaxaysay taariikh hore oo ahayd sannadkii 2013 markii ay Borussia Dortmund oo uu tababare Klopp watay ay 3-2 kaga adkaatay Malaga oo uu laylinayey Pellegrini, waxaana kulankaas oo ahaa semi-finalka Champions League ay waqtigii dhamaadka heshay Dortmund laba gool, iyadoo afar ciyaartoy oo Borussia Dortmund ah ay Offside ku jireen.
Manuel Pellegrini oo dhacdadaas hore xasuusan ayaa waxa uu yidhi: “Klopp wuxuu caadaystay inuu ku badiyo goolal offside ah. Aniga wuxuu igu garaacay waqtigii Malaga gool toddoba mitir uu offside kusii jiray. Markaa waxba kama caban karo isagu.”
Tababare Manuel Pellegrini waxa kale oo uu ka hadlay goolkii Mane ka dhaliyey xalay iyo isku-day kale oo uu Origi sameeyey daqiiqaddii ugu dambaysay, waxaanu yidhi: “Waxay naga dhaliyeen gool hal mitir offside ah. Daqiiqaddii ugu dambaysayna Origi wuxuu ka horreeyey ninka laynka taagnaa (calan-wadaha), waana hal mitir oo kale oo offside ah.”
Intaas kaddib waxa uu soo qaaday haddii uu ku fikirayey inuu Liverpool u qabto si ay Manchester City usoo gaadho, waxaanu yidhi: “Toddobaadka gudihiisa waxa aan sheegay inaanu u baahanahay in aanu u guuleysano taageereyaasha dartood, haddii aanu gacan siinaynayo Manchester City na, way fiican tahay, waayo waa iyaguna waa kooxdaydii. Waxa laga yaabaa in sababtaas ay tahay midda aanu jeclaysanin tababaraha Liverpool.”